के तपाईलाई थाहा छ ? सेक्ससँग सम्बन्धित यी रोचक तथ्यहरु | Rajmarga
सेक्सको विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न एजेन्सीहरुले सर्वेक्षण गराएका छन् । जसको परिणाम निकै रोचक हुने गरेको छ।
यद्यपि यसको उद्देश्य स्वास्थ्यको दृष्टिले जानकारी बढाउनु हो । आज हामी यहाँ त्यस्तै केही रोचक तथ्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौ । जुन सम्भवतः तपाईका लागि नयाँ पनि हुन सक्छ ।
एक जानकारीका अनुसार एक चम्चा वीर्यमा करिब ५ क्यालोरी हुन्छ र एक पटक सेक्स गर्दा गरिब १०० क्यालोरी खर्च हुन्छ । यस्तो पनि मानिन्छ कि सेक्सले मोटोपन पनि नियन्त्रण गर्दछ ।
वीर्यलाई स्पार्म बैंकमा ३२१ डिग्री फरेनहाइट तापमानमा राखिन्छ । यो तापमानमा यसलाई अनिश्चितकालका लागि सुरक्षित राख्न सकिन्छ । एक पुरुषको वीर्य निस्कन्छ भने त्यसमा सामान्यतः २० देखि ५० लाखसम्म स्पार्म हुन सक्छ ।
एक जानकारीका अनुसार सेक्स गर्दा टाउको दुखाई ठिक हुन्छ । यसबाट तनाव पनि समाप्त हुन्छ । जसबाट मस्तिष्कको रक्त बाहिनी खुम्चन्छ । अझ अध्ययनहरुका अनुसार हस्तमैथुनबाट डिप्रेसनबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
कुनै पनि समय २५ प्रतिशत पुरुष सेक्सका बारेमा सोचिरहन्छन् । यौन अध्ययनहरुका अनुसार जुन व्यक्तिको अण्डकोष (टेस्टिज) जति ठुलो छ उसको धेरैसँग यौन सम्बन्ध रहने सम्भावना हुन्छ ।
संसारमा सबैभन्दा लामो लिंगको लम्बाई १३ इन्च –उत्तेजित अवस्थामा) नापिएको छ। जबकि सबैभन्दा छोटो लिंगको लम्बई एक सेन्टिमिटर थियो । एक औषत पुरुषको लिंग त्यतिबेला उत्तेजित हुन्छ जतिबेला यसमा दुई चम्चा रगत एकत्र हुन्छ ।
एक पुरुषले आफ्नो जीवनकालमा औसतः १७ लिटर वीर्य निकाल्न सक्छ । जसमा आधा अर्ब स्पार्म हुन्छ । जब एक जना पुरुष सेक्सुअल रुपमा उत्तेजित हुन्छ तब उसको अण्डकोषको आकार ५० प्रतिशतसम्म बढ्छ ।
४० वर्षसम्मका अधिकांश पुरुषको लिंग १० सेकेन्डमा उत्तेजित हुन्छन् । तनावको अवस्थामा या उत्तेजित अवस्थामा एउटा सानो निष्क्रिय लिंग, ठुलोको तुलनामा अधिक फैलावट प्राप्त गर्न सक्छ । समलैंगिक पुरुषको तुलनामा स्ट्रेट पुरुषको लिंगको आकारमा छोटो हुन्छ ।
जब पुरुष र महिला सेक्सको चरम सुखको अवस्थामा हुन्छन् तब यो स्थितिमा दुवैको मुटुको गति १४० प्रतिमिनेट हुन्छ । ७५ प्रतिशत व्यक्तिको वीर्यपतन ३ मिनेटभन्दा पनि कम समयमा हुने गर्दछ ।
एक अध्ययन अनुसार १५प्रतिशत वयस्क आफ्नो कार्यस्थलमै यौन सम्बन्ध कायम गर्दछन् । संसारका ४१ प्रतिशत पुरुष यस्ता हुन्छन् जो अधिक पटक सेक्स सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छन्, तर यस्ता महिलाको संख्या २९ प्रतिशत मात्र हुन्छ । ग्रीक दम्पत्ति वर्षमा औषतः १३८ पटक सेक्स सम्बन्ध कायम गर्छन् जुन संसारमै सबैभन्दा बढी हो । यसको तुलनामा जापानी दम्पत्ति वर्षभरमा मात्र ४५ पटक मात्र सेक्स सम्बन्ध कायम गर्छन् ।
५ प्रतिशत वयस्क यस्ता हुन्छन् जो हरेक दिन सेक्स गर्दछन् । २० प्रतिशत सातामा तीन वा चार पटक सेक्स गर्छन् । वैज्ञानिकहरुको भनाइअनुसार एक व्यक्तिले कति पटक सेक्स गर्छ त्यो उसको उमेरको एक्सपेक्टेन्सीसँग सिधा सम्बन्धित छ । मानिसलाई शान्त गर्ने चक्की वेलियमको तुलनामा सेक्स १० गुना बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
जब एक जना पुरुषको लिंगबाट वीर्य निस्कन्छ त त्यसको गति २२.९ मिल प्रतिघण्टा अर्थात १०० मिटरको दौडमा रेकर्ड बनाउने धावकको गतिभन्दा तिब्र हुन्छ । जबकि स्पार्मको गति निकै सुस्त हुन्छ ।
एक औषतः स्पार्म १ घण्टामा ७ इन्च अघि बढ्छ । यदि बिचमा कुनै बाधा छैन भने एक पुरुषको वीर्य १२ इन्चदेखि २४ इन्चसम्म पुग्न सक्छ । एक औषत वयस्क पुरुषको अण्डकोषमा यतिधेरै स्पार्म हुन्छ कि त्यसलाई एक चौथाई मिलसम्म फैलाएर राख्न सकिन्छ । यसका साथै क्याप्सुलमा यति स्पार्म हुन सक्छ कि त्यसबाट अहिले पृथ्वीमा रहेको जनसंख्याभन्दा बढी मानिस उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कुनै एक स्थानको तुलनामा एउटा व्यक्ति ओछ्यानमा हुँदा बढी झुट बोल्दछ । सेक्स गर्नका लागि २४ प्रतिशत पुरुष झुट बोल्छन् । जबकि यस्तो गर्ने महिलाको संख्या मात्र १० प्रतिशत हुन्छ ।
७० प्रतिशत पुरुष र महिला जब सेक्स गरिरहेका हुन्छन तब कुनै तेस्रो व्यक्तिका बारेमा सोच्दछन् । यसरी नै दुई तिहाई धावकका अनुसार उनीहरु दौडिरहेका बेला पनि सेक्सका विषयमा सोचिरहन्छन् । एजेन्सी
Previous post: कुन नङ फुल्दा के हुन्छ ? आफ्नो नङ हेरेर आफै पत्ता लगाउनुस्
Next post: केही मज्जाका चुट्किलाहरु
कुन देशका नागरिक बढी बाँच्छन् ? यस्तो छ दीर्घजीवनको रहस्य
कुखुराको गन्धले मच्छड यसरी भाग्दोरहेछ
यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी हुन् बचाउने आठ उपाय